प्रकाशित मिति: शनिवार, श्रावण १७, २०७७, ०३:२३:२६
हामीहरू सामान्यतया बिहानको सन्ध्या गर्दा र देवीदेवताको पूजा गर्दा पूर्व दिशातिर फर्केर, बेलुकाको सन्ध्या गर्दा पश्चिम दिशातिर फर्केर अनि श्राद्ध गर्दा दक्षिण दिशातिर फर्केर कर्महरू गर्दै आएका छौँ तर हामी किन अलग अलग कर्म गर्दा अलग अलग दिशातिर मुख फर्काएर कर्म गर्छौं ? भन्ने बारेमा शास्त्रीय र वैज्ञानिक कारणहरूको ख्याल गरेका छैनौँ । पुरा पढ्नुहोस्
कस्तो भोजन कसरी ग्रहण गर्ने ?
सोमवार, श्रावण ५, २०७७ डा. मतिप्रसाद ढकाल
पहिलाभन्दा हाम्रो भोजनालयमा खानाका धेरै प्रकारहरू त थपिँदै गए तर तिनले हामीलाई शौचालयमा र औषधालयमा धेरै समय प्रतीक्षा गरेर बस्न बाध्य बनाए । यसै सन्दर्भमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कस्तो भोजन कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा बताएका केही कुराहरूले हामीलाई स्वस्थ र मेधावी बनाउन केही न केही मात्रामा सहयोग पुर्‍याउलान् भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ । पुरा पढ्नुहोस्